‘विभेद पाइला–पाइलामा छ, न्याय मागे श्रद्धाञ्जली दिन्छन्’ - Naya Online
‘विभेद पाइला–पाइलामा छ, न्याय मागे श्रद्धाञ्जली दिन्छन्’
सोमवार, असार २१, २०७८ (July 5th, 2021 at 11:47am ) ब्रेकिंग न्युज, ब्लग
३ बर्ष अघि म धरानको भानुचोक बस स्टेशनबाट चितवनको लागि बस चढेँ । म दाहिने साइडको ६ नम्बर सिटमा थिएँ । अगाडिको ३ नम्बरको सिट खाली थियो । इटहरी या झुम्का कताबाट चढ्ने मान्छेको टिकट रहेछ । गाडी गुड्नै लाग्दा एकजना मधेसी मुलका वृद्धा चढ्नुभो र त्यो सिटमा थपक्क बस्नुभो । गाडी बिस्तारै गुड्न सुरु गर्‍यो । बाहिर रहेका गाडीको स्टाफ भित्र पस्यो र वृद्ध आमा उक्त सिटमा बसेको देखेर बसको स्टाफले सबै यात्रुहरूको ध्यानाकर्षण हुनेगरी हकार्यो । यो सिटमा किन बसेको ? यिनीहरूको त व्याहोरा यस्तै हुन्छ ! पछाडि गैहाल ! ति मधेसी आमालाई केही फरक परेन । सायद आदत परेको थियो । ती आमा गुड्दै गरेको बसमा सकिनसकी पछाडी गएर उभिनुभयो । केही यात्रुले अलिक राम्रै मुखले भनेको भए पनि हुनेथियो सम्म भने । त्यत्ति नै । वहाँको यात्रा सायद सप्तरीसम्म थियो ।
केहीक्षणपछि पुनः उनै मधेसी मुलकी आमाको उमेरको पहाडी मुलकी आर्य समुदायको आमा चढ्नुभो । आमा चढ्ने बित्तिकै उनै बसको स्टाफले कतासम्म आमा ? आउनोस् म सहयोग गर्छु भन्दै हातमा समाइ डोर्‍याउँदैलगेर एउटा सिट खाली गर्न लगाइ बसाए । मेरो आँखै अगाडि २ जना उहीँ उमेरका वृद्धाहरूलाई ती गाडीका स्टाफले यस्तो व्यावहार गरे कि मानौं ती आफ्ना मुल र समुदायका आमा मात्रै मान्छे हुन्, मधेसी मुलका आमा त मान्छे नै हैनन् । उनको वृद्ध अवस्थाले केही फरक पार्दैन ।
त्यो घटनाले मलाई पोलिरह्यो । स्पष्टरूपमा जातीय रंगभेद देखिने त्यो घट्ना तत्काल बाहिर आउनुपर्ने थियो भन्ने लागिरह्यो । तर, अहिले चर्चामा आइरहेको रूपा सुनारको घटनापछि थाहा भयो कि आखिर बाहिर आए पनि दोषी त उनै मधेसी मुलकी वृद्ध आमा बन्नुहुने थिएछ । वहस यसरी हुनेथिएछ कि त्यसरी अर्काको सिटमा बस्नु गल्ती हो । आफ्नै समुदायको नाताले पहाडी मुलकी आमालाई माया देखाए त के गल्ति भो ? आइएम वीथ पहाडी आमा ! ह्यासट्याग हुनेथिएछ ।
आज रूपा सुनारको मुद्दा ठिक त्यस्तै भएको छ । घरबेटीले मीठो मुखले भनेकी छन् कि “मलाई त केही छैन तर, मा हुनुन्छ र नि !” मीठो मुखले होस् या नमिठो मुखले आशय त जातकै थियो । कारण त जातकै हो । तर, उल्टै उनैमाथी उजुरी दर्ता भयो । ‘आफुलाई ३ दिन हिरासतमा राख्ने मान्छेलाई किन हिरासतमा नराख्ने ?’ ‘आखिर उ त कमिनी पो त ! हामी त उच्च जातिका पो हौं त ! कमिनिको तेत्रो आँट ?’ यससँग सम्बन्धित समाचारमा कतिपय प्रतिक्रिया यस्ता छन् । त्यसले पनि जातयि विभेद्को अहम्लाई प्रस्ट पारेको छ । रूपा र घरबेटीका अडियो बाहिरीएपछि रूपाको जातिय विभेदविरुद्ध उठेको आवाजले विझाएका कतिपय कथित उच्चजातिहरूलाई उक्त अडियोमा घरबेटीले बोलेको मिठो बोलीले मुटु छोएको छ । मन रुवाएको छ ।
त्यसो त रूपाले घटना घटेकै दिन फेसबुक लाइभमा आएर भनेकी थिइन् कि– सुरुमा कोठा दिने तर एउटै परिवारजसरी मिलेर बस्नुपर्ने घरपेटीले बताएको अन्त्यमा जातको कुरा आउँदा म कामीको छोरी हो भनेपछि वहाँ चुपचाप बस्नुभयो, बोल्नुभएन । अन्कनाएर म पछि खबर गर्छु नम्बर दिइराख्नु भन्नुभयो तर मैले केहि नभएको जस्तो अभिनय गरेँ । ठिकै छ आउन मिल्ने कि नमिल्ने मेरो साथीलाई फोन गरेर भन्दिनु भनेपछि पछि घरपेटीले साथीसँग कुरा हुँदा मिल्दैन भनेर भन्नुभएछ । सुरुवात यहाँबाट भएको थियो । पछि रूपासँगको अडियो भनेर बाहिरिएको संवाद जो साथीसँगको हुनसक्छ त्यहाँ मा (आमा)ले गर्दा भनेर प्रष्टसँग जाजीय कारण नै जोडेको पाइन्छ । कारण त जातीय नै देखिन्छ र छ । उक्त संवाद सुनेर हैन घरबेटीले त केहि भनेको हैन रहेछ आफै पो कामीको कुरा निकालेको रैछ भन्नेहरूले सुरुमै उनले लाइभमा आएर सबै कुरा गरिसकेपछि अन्त्यमा जातका कुरा आएपछि अनकनाएको कुरालाई बुझुनुपर्ने थियो तर बुझ पचाइयो । घटनालाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्दै लगियो ।
छुवाछुतविरुद्धको कानुन कानुनमा मात्र सिमित भएको रहेछ । अथवा उल्लेखित कानुन उच्च जाति, वर्गका लागि मात्रै रहेछ । उजुरी परिसकेपछि सोधपुछका लागि हिरासतमा लिनु स्वभाविक नै हो । तर, मुलुकका मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले झण्डा हल्लाउँदै बडो हर्सोल्लासका साथ रिहा गरी लैजान्छन् भने साच्चै यो देशमा कानुन छैन । शताब्दिऔंदेखि पशुभन्दा तल्लो दर्जाका रूपमा बाँच्दै आएका ती समुदायले आज आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउँदा तिनैलाई अपराधी करार गरी आफ्नो जातको र समुदायको शीर ढल्न नदिन मन्त्रीकै पावर प्रयोग गरि सरकारी गाडीमा बढो हर्सोल्लासका साथ रिहाइ गरिन्छ भने ढुक्क हौं नेपालमा न्याय पाइदैन । मन्त्रीकै सयोग पाइसकेपछि अझ साहस बटुलेका विभेदकारीहरूले रूपाको तस्वीरमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरे । ती मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुु त परैको कुरा कसैको चासोसम्म भएन । मानौं उनिहरूले बहुत ठीक् गरे । रूपा ठूलै अपराधी हुन् । अपराधिलाई जिउदै श्रद्धाञ्जली दिन पाइन्छ । मुखमा आएजति गालिबेइज्जत गर्न पाइन्छ ।
रूपा त्यो समुदायकी छोरी हुन् जुन समुदायका मान्छेहरू शताब्दिऔंदेखि पशुभन्दा तल्लो दर्जाको जीवन बाँचेर आएका थिए । केहि दशकअघिसम्म ठूलाबडाका जातका मान्छे भेटिएला कि भन्दै बाटो हिँड्दा पनि पीरैपीरमा हिँड्नुपर्ने, ठूलामान्छे भेटिइहाले हत्तपत्त कान्लामुनी लुक्नुपर्ने अवस्था थियो । उनिहरूको बाटो आफ्नो थिएन । धारा आफ्नो थिएन । केहि आफ्ना थिएनन् । कोही आफ्ना थिएनन् । अझैं पनि कानुन आफ्नो छैन । कानुन नभएको देशमा कानुनको सहायता लिन खोज्दा उनलाई मानसिक रोगी बनाइदिएका छन् ।
एउटा जामातले बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्दै आइरहेका छन् । विस्तारै भनेको कहिले ? सोच परिवर्तन हुन कति समय लाग्नुपर्ने हो ? जनयुद्धसँगै जातीय मुद्दाहरूमा शसक्त रूपमा बहस सुरु हुन थालेको हो । प्रजातन्त्र आयो, जनयुद्ध भयो, राजाशासन ढल्यो, गणतन्त्र आयो अझैँ विभेदको पर्खाल ढल्न सकेन, विभेदको लेदो हाम्रो गिदिमा टाँस्सिनै रह्यो भने त्यो विस्तारै कहिले आउँछ ? अब त बिस्तारै हुन्छको सट्टामा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नुपर्ने हैन र ! विभेदको जरा गाडेर बिस्तारै–बिस्तारै भनिरह्यौं भने त्ये बिस्तारै कहिल्यै आउनेवाला छैन । विभेदलाई मान्दैनौं भन्नेहरूमा पनि विभेदको अवशेषहरू छन् । ति अवशेषहरू क्रमशः दोस्रो पुस्तामा सर्दै गइरहेका छन् भने हामी कसरी भन्न सक्छौं ‘विस्तारै हुन्छ ?’
अन्त्यमा न्यायको झिनो आशमा रूपा पुनः सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेकी छन् । हेरौं सर्वोच्चको तराजु कतातिर ढल्किन्छ !
प्रयोग भएका तस्वीरहरू गुगलबाट लिइएका हुन् ।